Hlaziya umbala, phumla ukupeyinta kwi-Mac yakho ngoku simahla ixesha elilinganiselweyo | Ndisuka mac
Sijongene nesicelo esitsha esisandula ukufika kwiVenkile ye-Mac kwaye sithembisa ukwenza abasebenzisi bayo babe nexesha elimnandi. Okokuqala, qaphela ukuba asijonganga noyilo loyilo lwegraphic kwaye asizukukwazi ukupeyinta njengoko sinako kwezinye izicelo "ngokunqakraza okanye ngokurhuqa" kule meko. into ekufuneka siyenzile kukukhetha umbala kwaye ucofe nje kwisithuba ukuze ibala. Kubonakala kulula kwaye kuyadika, kodwa xa ubunaye naye okwethutyana kuyaphela kukuzonwabisa.
Ukongeza, into elungileyo malunga nesicelo seRelax Colour kukuba iyasivumela Umbala ngendlela egqibeleleyo kwaye imizobo yethu iya kuba mihle. Zonke iitemplate esizibonileyo zenziwe ngeentyatyambo okanye ngeempawu zeentyatyambo, kodwa oku akuthethi ukuba umsebenzisi uyayeka ukucinga ngomsebenzi okomzuzwana kwaye azivumele ubunewunewu bokuphumla.
Isicelo sifike ngo-Epreli odlulileyo kwivenkile yesicelo kunye Ixabiso le-0,99 euro kwaye ngoku simahla ixesha elilinganiselweyo, Ke ukuba ungomnye wabantu abafuna ixesha ukunqamla, esi sicelo sinokuba luncedo. Sele silumkisile ukuba ayinaso isikhombimsebenzisi esifanelekileyo, ukuba banokongeza ukhetho lokushiya inkululeko engakumbi kumsebenzisi ukuze afake umbala ngqo ngokurhuqa kwaye ucofe kwindawo ekhethiweyo, kodwa ekugqibeleni le nto ikhangelwe yile app kukuba sichithe Ngelixa ukhululekile phambi kweMac kwaye nangona inokubonakala ngathi bubuxoki, iyaphumelela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Mac App Store » Hlaziya umbala, phumla ukupeyinta kwi-Mac yakho ngoku simahla ixesha elilinganiselweyo
UMerci Durango sitsho
Phendula uMerci Durango
Uyivula njani ikhonkco kwithebhu entsha kwi-Safari